Indleko Kahulumende Iqongiswa Liholo Lezisebenzi Zakhe
Mbimbitho 26, 2015
Uhulumende uthi ukuqonga kwendleko yokuholisa izisebenzi zikahulumende kwenza kube nzima ukuba esale elemali yokuquba eminye imisebenzi eqakathekileyo efana lokuvulwa lokulungisiswa kwemigwaqo, ukutholiswa kwamandla kagetsi, amanzi lokunye.
Ekhuluma emhlanganweni wabomanjinela abasemisebenzini wama Quantity Surveyor eHarare ngoLwesine okhokhela ugatsha lwenhlelo zikahulumende kweze mali lokuhugwa kwabafuna ukusungula amabhizimusi eZimbabwe, uDokotela Desire Sibanda imisebenzi yokuvuselela inhlelo zentuthuko kuleli idinga imali enengi kakhulu engekhoyo okwamanje ngoba inengi lemali yesizwe iphelela kuholo lezisebenzi osokumele kulungisiswe.
Uhulumende uthi lenhlanganiso asebenzelana lazo eziphathisa ngemali ezigoqela o-IMF le World Bank seziqonqosela udaba lokwehlisa indleko kahulumende ikakhulu eya kuholo. Indleko yeholo elibhadalwa nguhulumende ibikwa ithatha isilinganiso sokungamatshumi athobaminwembili ekhulwini 80% yemali yonke esetshenziswa nguhulumende okulinani eliphezulu kakhulu.
Ku budget yalonyaka kumali efika kuma billion amane $4.1billion, efika ku $3.6billion yayo iphelele kuholo okutshiya uhulumende elezigidi phose ezingamakhulu amahlanu amadollar-$492million kuphela yokuquba yonke eminye imisebenzi yayo.
Umnumzana Joshua Ndlovu we National University of Science and Technology -NUST uthi imisebenzi yama surveyor icina idula ngoba kungela kumanyana kundlela abasebenza ngayo ethi ukumanyana kungehlisa indleko.
Umnumzana Sibanda uthi njengendlela yokuthuthukisa ezomnotho sebehuga izizalwane zeZimbabwe ezihleli kwamanye amazwe ukuba ziphatheke emisebenzini yesizwe behuga lamanye amazwe afana le Germany, UK, Denmark, Sweden le France asekhanya ethakazelela ukuphatheka kuntuthuko yelizwe ethi sebefunda njalo emazweni afana le Mozambique, Angola le Ethiopia ukuba avuselele inotho yawo kanjani.
Umhlangano lo oqoqwe yinhlanganiso yeZimbabwe Institute of Quantity Surveyors ungenwa zincitshi ezivela emazweni agoqela I zansi ye Africa, Angola, Botswana lamanye njalo uphela ngoLwesihlanu.